Bazocobelelwa ngolwazi lokubhala amanoveli | News24
Bazocobelelwa ngolwazi lokubhala amanoveli
AMALUNGA enhlangano yababhali bolimi lwesiZulu Usiba azothola ithuba eliyingqayizivele lokufundiswa nokucotshelelwa ngolwazi ngezindaba zokubhala amanoveli emhlanganweni ozoba semtapweniwolwazi iBessie Head ngoMgqibelo mhla zili-18 kuNhlaba (May).
Ngokusho kukaDkt Moses Hlatshwayo uthe lo mhlangano ungomunye okuzodingidwa khona ngomgubho weNkinsela yaseMgungundlovu uSolwazi Professor Nyembezi nobezobe egubha iminyaka eli-100 ezalwa ukube usaphila.
Isikhulumi sosuku kulo mhlangano kuzobe kunguSolwazi Zulu ofundisa eNyuvesi yaKwaZulu-Natal.
“Leli kuzophinde kube ithuba labo bonke ababhali abangaphansi koSiba ukuthi bakwazi ukuthi balethe izincwadi zabo eziyizinoveli zesiZulu abazibhalile kodwa zanga[shicilelwa] ukuze bezothola ithuba lokuwina imali elinganiselwa ku-R15 000.
“Izinga lezincwadi zabo kumele libe seqophelweni eliphezulu elifana nelikaSolwazi uNyembezi okanye ngaphezulu,”kubeka yena.
Uqhube wathi abadle umhlanganiso kulomncintiswano bazomenyezelwa ngosuku olukhulu lo mcimbi nozoba ngasekupheleni konyaka.
Kulo mhlangano uDKt Hlatshwayo uzophinde aphumele eshashalazini nalapho ezobe echaza khona ngempilo yakhe kanye nezinto asezenzile njengombhali wamanoveli esiZulu aphinde abe kwezomculo futhi.
Ngeminye imininingwane mayelana nalomhlangano ungathintane noDkt Hlatshwayo enombolweni ethi : 071 745 1423.